ဆရာ - ပညာရေးအတွက် Austin အပေါင်းအဖေါ်များ
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ ကိုထူးခြားစေပါ။
ယနေ့ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်လာပါ
အဘယ်ကြောင့်ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သင့်သနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များသည်စာသင်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဂရုစိုက်တတ်သောလူကြီးများဖြစ်သည်။ သူတို့အားလူမှုရေးစွမ်းရည်များတိုးတက်အောင်ကူညီခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းတို့ကိုကူညီသည်။ သူတို့ကကျောင်းသားများကိုစိတ် ၀ င်စားမှုအသစ်များဖန်တီးရန်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်၊
မှသုတေသန အဆိုပါလမ်းညွှန်စင်တာ လမ်းညွှန်ဆက်ဆံရေးတွင်ပါ ၀ င်နေသောလူငယ်များသည်
ကျောင်းတက်ခြင်း၊ ကျောင်းအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများနှင့်အလယ်တန်းလွန်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်အလားအလာများအပါအ ၀ င်အပြုသဘောဆောင်သောပညာရေးရလဒ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။
အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းစသည့်အပျက်သဘောဆောင်သောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြေနည်းသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားအားထောက်ခံခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းရင်းမြစ်ဖြစ်ခြင်းသည်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခါတစ်ရံမည်မျှခက်ခဲကြောင်းမှတ်မိနိုင်သောကြောင့်ကျေနပ်အားရမှုရှိခဲ့သည်။ သူ၏အောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ပြီးသူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးသည်ဟုသူ့အားသတိပေးနိုင်ခြင်းသည်လည်းအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဉာဏ်ရည်နှင့်အလုပ်ကျင့်ဝတ်တို့ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ရာသီတိုင်း၌သူ၏ယုံကြည်မှုတိုးများလာသည်ကိုငါတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ Mentor အတွက်ရှာသောအရာကို
APIE ဆရာများသည်စာသင်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်နာရီအထိကတိသစ္စာပြုသင့်ပြီး ၄ င်းတို့၏ကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်တိမ်းညွတ်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတက်ရန်ရရှိနိုင်ရမည်။ ဆရာများလည်းဖြစ်သင့်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများတွင်လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်သူတို့ကိုလမ်းညွှန်ရန်အထောက်အကူပြုကွန်ယက်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည်ကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမပြုမီ APIE ၏ကျောင်းဆက်သွယ်မှုမန်နေဂျာမှလမ်းညွှန်သင်ကြားခြင်းကိုခံယူသည်။ ဤသင်တန်းသည်ထိရောက်သောလမ်းညွှန်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်နည်းဗျူဟာများနှင့် AISD ကျောင်းများတွင်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်မူဝါဒများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
သင်တန်းတက်ပြီးနောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းဝင်း၌ Mentor ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့သည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအားကျောင်းသားတစ် ဦး နှင့်အတူတကွယှဉ် တွဲ၍ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုပေးလိမ့်မည်။
သင်၏လက်ဆောင်သည် Austin ISD ကျောင်းသားများကိုဂရုစိုက်တတ်သောလူကြီးများနှင့်၎င်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသည်။ သုတေသနအရကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားလုံးသည်လူမှုရေး၊
APIE ဆရာများသည် Austin ISD အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းနိုင်သည်။ ဤကျောင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်၊ www.austinisd.org/schools.
ဤကျောင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက၊ ဤနေရာတွင် AISD က်ဘ်ဆိုက်.
သင်အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများအားလမ်းညွှန်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများပေးရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ sign up ကို APIE လမ်းညွှန်သူအဖြစ်မှတ်ယူပါ။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ဆရာများလိုအပ်နေသည်။ အချို့ကျောင်းများတွင်စောင့်ဆိုင်းစာရင်းရှိသည်။ တစ်ပတ်လျှင်သင်၏အချိန်မိနစ် ၃၀ မှ ၄၅ မိနစ်မျှသာလျှင်ကျောင်းသားများအားကျောင်းနှင့်အထက်တွင်အောင်မြင်ရန်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ငယ်ငယ်တုန်းကသင်လိုအပ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။